Iimaski zoKhuseleko eziThengisayo, Abavelisi beMaski yokuPhucula ubuso kunye nabaXhasi | Inkwenkwezi eBlue
Le nkampani yinkampani exhaswa ngemali lijolise kwimveliso yeemaski zokukhusela.
Imaski kunye noMphefumli
Ibanga lasePpe Ppe Face Mask & Isiphefumli
Imveliso entle yezixhobo ezizodwa
I-Blue Star brand-proof-proof, deodorant kunye ne-anti-microtoxic masks zokuzikhusela kunye neemaski zokhuselo zothotho eziveliswa yinkampani zenziwe ngezinto ezizodwa, ukhuseleko olunzima, oluhle nolomeleleyo.
I-Blue Star brand-proof-proof, deodorant kunye ne-anti-microtoxic masks zokukhusela iimaski kunye neemaski zokhuselo zomqhaphu eziveliswa yinkampani zenziwe ngezinto ezizodwa, ukhuseleko olunzima, oluhle nolomeleleyo; isixhobo sokuphefumla imaski yobuso, indiza elahlwayo engalukiweyo, iimaski zokhuselo-ntathu, iimaski ze-Butterfly, i-KN95, iimaski zothotho lwekomityi, iimaski zothotho lwezemidlalo, iimaski ezibonisa ukungabandi, iimaski ezibonakalayo kunye nezinye iimaski zonyango; phakathi kwabo, iimaski ezinemilinganiselo emithathu yabantwana ziyilelwe kancinci kwaye imibala ayinakukhethwa.
Imaski emi-3 ye-Ply Medical
Izixhobo ezisisiseko ezisetyenziswe kwi-Blue Star zi-canvas, irabha okanye iplasitiki ekumgangatho ophezulu. Ukhetho luxhomekeke kusetyenziso, umzekelo, ngaphakathi okanye ngaphandle. Imozulu nayo idlala indima ebalulekileyo njengeendawo ezinomswakama omphezulu kunye nokufuma. Inkqubo yethu engqongqo ye-QC kunye nolawulo inokuqinisekisa umgangatho ophezulu we. Ukusetyenziswa kwale mveliso kunceda abantu ukuba banciphise iiyure zabo zokusebenza kwaye kunceda nabo ekutyhafeni kwimisebenzi yokudinwa nakwimisebenzi enzima.
KN95 / FFP2 Banokubulawa kwama-
Iiklip zempumlo emacala amathathu-KN95
Imaski yokhuselo yezonyango
Imaski yokhuselo kwezonyango
Imaski emacala mathathu ngaphandle kwempumlo
Inkampani ine-ISO9001 inkqubo yolawulo lomgangatho, isatifikethi semveliso esikhethekileyo sokukhusela izixhobo, isatifikethi sokukhusela izixhobo zokusebenza. Iphepha-mvume lemveliso yezixhobo zonyango Isatifikethi se-FDA, i-CE, esidweliswe kuluhlu olumhlophe lwe-Ofisi yoMphathiswa Wezorhwebo, Isiqinisekiso Sangaphandle kunye noMbutho Wezonyango Wangaphandle kunye noMbutho wokuThumela ngaphandle.
Ngaphezulu kweminyaka engama-50, ebengumseki wemizi-mveliso yemaski eFujian. Umseki akazange ayilibale injongo yakhe yoqobo, ukhumbule imishini yakhe, wakhokela abantu beBlue Star ukuba baqhubele phambili, kwaye bazabalazela ukukhusela ubomi babantu abasebenza ngaphambili. Kwi-2020, imeko yobhubhane ngequbuliso yahlasela. Abantu aba-Blue Star abayilibalanga imeko yobhubhane kwaye abantu abangenanceba bayathandana. Ukuphendula kumyalelo ka rhulumente wokuba aqhubeke nomsebenzi ngosuku lokuqala lonyaka, baba ngamashishini aphambili okuthenga nokugcina iBhunga likaRhulumente.
Umyalelo ovela eMalaysia
I-odolo evela eMalaysia: ibhabhathane eline-ultra-thin, kunye neklip yeempumlo, ilaphu elinyibilikisiweyo elungiselelwe wena, kunye nezinto ze-nano, ezinemisebenzi ekhethekileyo. Ipakishwe ngokukodwa kwiingxowa zeplastiki zonyango, ezikumgangatho ophezulu.
Iziko likaxakeka laseCzech lixhotyiswe ngemaski kaNafu
Xiamen Blue Star Enterprise Co., Ltd. esekwe ngo-1987.
Ukuthembela kwiYunivesithi yoNyango yase China, iFujian Medical University kunye neQilu Medical College yeYunivesithi yaseShandong, eli shishini ngokudibeneyo lasungula indawo yophando yesayensi kunye netekhnoloji kwiSithili seXiang'an ukuqhuba ukuphuculwa kwemizi-mveliso kunye nokwandisa umgca wemveliso yeshishini kwiimaski zokhuselo, kuqala- iklasi kunye nezixhobo zonyango lodidi lwesibini ukuya kunyango lwesithathu lwezonyango kunye nezixhobo zokuthintela ubhubhane njengezixhobo kunye nezinto ezisetyenziswayo, ukwenza iqonga lokuvelisa izixhobo zonyango.
UKUBA UNEMIBUZO EMININZI, BHALA KULE